साउदी अरबबाट १ सय ५७ जना नेपाल आइपुगे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
साउदी अरबबाट १ सय ५७ जना नेपाल आइपुगे
असार ५, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — साउदी अरबबाट १ सय ५७ जना नेपाली बोकेको पहिलो उडान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । जसमा ४ जना गर्भवती महिलासहित ८ जना महिला छन् । एक जनाको शव पनि छ ।
साउदी अरबको दोश्रो सहर दमाम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको हिमालयन एयरलाइन्समार्फत उनीहरु शुक्रबार बिहान ७:३० काठमाडौं आइपुगेको हो । साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले उडान सुरु भएकोले स्वदेश फिर्न चाहने नेपालीलाई धैर्य रहन आग्रह गरेका छन् । साउदीमा १० हजार जनाले स्वदेश फिर्न दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।
पहिलो उडानमा अलपत्र परेका कामदारहरु आएको दूतावासले जनाएको छ । दोश्रो उडान राजधानी रियादबाट भोलि शनिबार हुँदैछ । तेश्रो उडान भने आउँदो मंगलबार तय भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका कामदारको आरडीटीमार्फत परीक्षण गरिएको हो । साउदीले आरडीटी परीक्षणलाई मान्यता दिएको छैन । साउदीमा पीसीआरमार्फत परीक्षण गर्न १५ सय रियाल शुल्क लाग्ने बताइएको छ ।
प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०८:१३
राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता
असार ५, २०७७ उमेशप्रसाद मैनाली
कुनै पनि धर्म वा वादका भन्दा राष्ट्रियताका अनुयायीहरू अधिक हुने गर्छन् किनकि यसमा अन्तर्निहित भावनात्मक, प्रेरणात्मक र संवेगात्मक ऊर्जाले व्यक्तिलाई स्वयम् आत्मविसर्जन गर्नसमेत प्रेरित गर्न सक्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ— मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् । यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो । फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनमको मननयोग्य भनाइ छ, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’ देशभित्र विभिन्न समुदायका आआफ्ना भाषा, संस्कृति, धर्मको प्रवर्द्धनका कुराहरू भइरहन्छन् । तर, नेपाली राष्ट्रियताका लागि केही साझा मान्यतामा बृहत्तर एकता भएको छ ।
अहिले नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भइरहेको छ जसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ । राजनीतिमा सधैं सही वा गलत (राइट अर रङ) को कुरा हुँदैन, बरु दक्षिण वा वाम (राइट अर लेफ्ट) को कुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ । सत्तामा रहनेहरूका लागि सत्ता एक मात्र स्वार्थ हुने र विपक्षीहरू रचनात्मक हुनुभन्दा विरोधमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति राजनीतिको सामान्य खेलजस्तै हो । तर, परिस्थिति यस्तो भइदिन्छ, उनीहरूका क्षुद्र स्वार्थहरू राष्ट्रिय गौरवसामु गौण हुन पुग्छन् । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायका स्वार्थप्रतिको संकीर्ण निष्ठाको स्थान राष्ट्रिय निष्ठाले लिन पुग्छ । केही महिनाअघिदेखि नेपाली गौरव, नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण भएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्र महाकाली नदीपूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको हाम्रो स्वामित्वमाथि छिमेकी मुलुक भारतबाट धावा बोलिएको छ । छ दशकअघिसम्म नेपालको प्रशासन निर्विघ्न रूपमा चलेको भूभागलाई भारतले केही महिनाअघि आफ्नो नक्सामा समावेश र त्यहाँ सडक निर्माण गरेपछि नेपालीहरूले ठूलो धोका भएको महसुस गरेका छन् । अप्ठेरो पर्दा उक्त भूभाग प्रयोग गर्न दिने नेपालको सदाशयप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा भारतबाट यति साह्रो कृतघ्नता किन प्रदर्शित गरियो, बुझ्न सकिएको छैन । नेपालको विश्वास र मित्रतामाथि छिमेकी मुलुकबाट भएको रकमी र झेली कामबाट नेपालीहरू झस्किएका छन् । तर, हरेक कामको सकारात्मक पाटो पनि हुने गर्छ । ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।
नेपाल सरकारले भने यसबाट राम्रै पाठ सिक्न जरुरी छ । पहिलो त राष्ट्रियता दल वा भेगविशेषको पेवा नभई सबै दल, वर्ग, भेगको साझा सरोकार हो । राष्ट्रियताको मर्म त्यसलाई बढी थाहा हुन्छ जसले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसलाई अनुभूति गरेको हुन्छ । सुस्तामा अतिक्रमण हुँदा लड्ने त्यहाँका बासिन्दाहरू, बर्सेनि डुबानको समस्या भोगेका मधेसी समुदायहरू, विदेशमा पहिचानविहीन भएका नेपालीहरूलाई राष्ट्रियताको वास्तविक मर्म अरूलाई भन्दा बढी थाहा छ । विदेशमा बसेर देश फर्किन लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो झन्डावाहक विमानमा प्रवेश गर्दाको भावना र नेपालको भूमि टेक्दाको मनोविज्ञानमा राष्ट्रियता परिभाषित भएको हुन्छ । अहिलेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतालाई कसरी अझ स्थायी र मजबुत गराउने भन्नेमा सरकारको चिन्तन र निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ । देश रहे राजनीति गर्न पाइन्छ र आफ्ना वर्गीय मागहरू राख्न पाइन्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ । यस्तो एकताबाट सिर्जित अवसर कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुन्छ । यसलाई अमूल्य पुँजीका रूपमा प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारमा रहनेहरूको हुन्छ ।
नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुन भने आवश्यक छ । अमुक संस्था वा दल अराष्ट्रवादी र आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने संकीर्ण सोचाइबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजाको एकल ‘कमान्ड’ मा चल्ने पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका सरकारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेको देखिएको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल– भारतबीचका विभिन्न वार्तामा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई विवाद समाधान हुन बाँकीमा राखिएको देखिन्छ । २०४७ सालपछिका सरकारहरूबाट पनि यो भूमिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लगातार प्रयास भएकै छ । नापी विभागको नेतृत्वको टोलीदेखि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरको संयन्त्रले यो र सुस्ताको विवाद समाधान नभई ‘स्ट्रिप म्याप’ मा दस्तखत गर्न नमानेकै हो । अहिले पनि यी संयन्त्रहरूमा भाग लिने तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीहरू जीवित नै हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यसमा लिनुभएको अडान कसैले भुल्न सक्दैन । यस पंक्तिकारले पनि सीमा सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरूमा विवाद रहेका स्थानहरू ‘स्टाटस को’ मा राखिनुपर्ने निर्णयमा दस्तखत गरेको छ । राष्ट्रियता सबैका लागि उत्तिकै प्रेरणात्मक हुन्छ र देशप्रेम सबैको भावनामा बहेको हुन्छ । त्यसैले सबै नेपालीको संवेगात्मक मनोविज्ञानलाई हाम्रो राष्ट्रियता अझ सुदृढ बनाउनमा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले भने जनविश्वास आर्जन गर्न अझ निकै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही नक्सा र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिसक्दा पनि यिनीहरूले यो दबाबमा फिर्ता लिन्छन् भन्दै जनप्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास गरेको सडक–गफ सुनियो । नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूको जिज्ञासा पनि यस्तै थियो । यो डरलाग्दो नकारात्मक सोचलाई कामबाटै सकारात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । कणिक नीतिमा उल्लिखित भनाइ सरकारमा रहनेहरूका लागि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ, ‘समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन । अकाट्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर सत्यको लडाइँ लडेमा चाँडै हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ । सत्यको विजय सदैव हुन्छ । अर्को पक्षले बुझ्नुपर्छ, आफूलाई दुख्ने घाउ अरूलाई पनि दुख्छ । उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ? यस्ता इतिहासबाट सिकेमा सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०८:०६